Indlela yokudlula iifayili kwi-Ipad kwi-PC-Geofumadas
Indlela yokudlula iifayili kwi-Ipad kwi-PC
Meyi, 2011 Apple - Mac
Ukusebenza kwiipilisi kuyindlela esiyifanele siyenze ngayo, kuba kuyinto engenakuguquka. Kule meko siza kubona indlela yokusombulula umba wokudlula idatha phakathi kwe-PC kunye iPad ubuncinane ezintathu.
Le ndlela mhlawumbi iyona ndlela efanelekileyo, kuba kuphela intambo yokuxhuma phakathi kwe-ipad iyadingeka ize ifakwe kwi-PC nge-USB. Ndiyaphinda ndiyisebenzise, ​​kuba ikhebula yinto efanayo ekusetyenzisweni ukuhlawula i-ipad ngoko akunakwenzeka ukuba ungabi nayo.
Ukuthumela ifayile kwi-Ipad, kufuneka ukhethe ifayile kwaye wenze ukhetho "thumela kwiItunes". Emva koko kwi-PC, i-iTunes ivula, isixhobo sikhethiwe kwaye kwisithuba esiphambili ukhetho "izicelo". Emva koko, kwicandelo elingaphantsi ungabona izicelo ezahlukeneyo abanokwazi ukwabelana ngolwazi ngeTunes, ngokukhetha siyakwazi ukubona ifayile esinqume ukwabelana ngayo ngeTunes.
Ukusuka apha kukhethwe kwaye kugcinwa kwifolda yomdla wethu.
Xa sifuna ukuthumela kwi-Ipad, ngoko sikhetha inketho "Yongeza", kwaye khangela ukuba iifayile zizakulayisha. Kule meko, ndilayisha uluhlu lwamacandelwana ukuba luboniswe kwisicelo se-GISRoam, ngoko ke kufuneka ndiqinisekise ukuba ndilayishe zombini iifayile ze-dbf kunye ne-shx.
Ngamanye amaxesha, kubonakala ukuba akukho nto iboniswe kule mpaneli, ngokuqhelekileyo kuba i-PC ayinakulungelelaniso kwi-RAM yayo, ngoko kuyacetyiswa ukuba uvale i-iTunes kwaye uyivule kwakhona; kodwa akukho nto ilahlekile okanye isuswe apha.
2. Nge imeyile
Ngenxa yoko, i-Ipad iyadingeka ukuba inxibelelwano lwe-Inthanethi. Oku kunokwenzeka nge-intanethi engena-wire okanye uxhumano lwe-3G, naluphi na umnikezeli onokusinika izicwangciso ezivela kwi-$ 12 ngenyanga. Ikhadi lilingana neSIM eqhelekileyo kodwa kungekhona ngobukhulu, kwindwendwe yam yakusasa ngaphandle kwelizwe ndiyithenge enye ndiyinqumle ngeesisisi kwaye yasebenza kakuhle kum; enye indlela engabizi kuba ukuhamba ngeendleko kudla ngexabiso.
Ngoko ukuba umatshini uqhagamshelwe kwi-Intanethi, nge-imeyile sinokuthumela iifayile.
3. Ii disks
Ezi ezinye iindlela, ezinye zazo zihlawulwe. Ngokuxhomekeke kwiifayile ezifakiwe, xa ukhetha ifayile ikhetho kufuneka ivele:
Ezi zikhetho ezifanayo zisebenza kwi-iPhone kwaye ziqinisekile ukuba zinokunye okukhethwa kukho, okufana nokusetyenziswa kwee-adapter zamakhadi ze-SD, amakhadi e-USB okanye izicelo zokufikelela kude.
Post edlulileyo«Edlulileyo Kubonakala ngathi ingxaki yeHonduran iphelile
Post Next Ukuthelekisa njani amaxwebhu amabini eLizwiOkulandelayo "
Enye Impendulo "Indlela yokudlula iifayili kwi-Ipad kwi-PC"
Enye yezona zinto zisebenzisekayo kwiimeko zediski ebonakalayo yiDropbox, kuba idatha ingafumaneka kwiwebhu, into ebalulekileyo kwiPC kunye ne-iPad.
Ukongeza, kunye ne-2 GB enikezelwa yiDropbox, inokwaneleyo ngaphezu kokutshintshwa.